रक्सी "Moscato" (Moscato): स्वाद को वर्णन, समीक्षा
खाद्य र पेय पदार्थ, वाइन र आत्माको
त्यो शब्द "Moscato" को सम्झना गराउँछ? निस्सन्देह, अंगूर को प्रकार। साँच्चै, इटालियन शैम्पेन "Moscato" हामी यहाँ छलफल गरिने को, यो देखि बनेको छ। यो एक उत्कृष्ट दाखको बोट छ। यसको नाम शब्द "musk" बाट आउँछ। त्यसैले यसलाई तीव्र स्वाद र मिठास लागि प्राचीन समयमा भनिन्थ्यो। मासु विशेषताहरु रक्सी स्पार्कलिंग को यो विविधता देखि, हामी तल वर्णन गर्नेछ। इटाली, निर्माता को धेरै आफ्नो उत्पादन "Moscato" को रूपमा लेबल प्रस्ताव। उदाहरणका लागि, रक्सी बिक्री टाइटेनियम कम्पनी "Cinzano" शैम्पेन को बारेमा एक दर्जन यसको सूची छ। जो निर्माता सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ? हामी यो मुद्दा हेर्न हुनेछ। कुनै पनि लागत शैम्पेन केही connoisseurs। तर हामी अझै पनि उत्पादन लागत विचार गर्नुहोस्।
मस्कट अङ्गुर र चम्केको मदिरा बारेमा केही
यो विविधता मीठो र धेरै विशिष्ट छ। शैम्पेन लागि धेरै उपयुक्त छैन? इटालियनहरू त लाग्छ छैन। पहिले, को "शैम्पेन" धेरै भएको पेय को नाम डाक्टर प्रमाणपत्र सुरक्षित छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? के पेय पदार्थ, हुर्किसकेका र रक्सी को फ्रान्सेली क्षेत्रमा उत्पादित रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। र अन्य सबै चम्केको मदिरा अन्य नाम हुनुपर्दछ। यी कानुनी niceties इटालियनहरू आफ्नो शैम्पेन "Moscato" "Spumante" वा "Prosecco" कल, हिंडे। यो किसिम को अङ्गुर unpretentious छ र ठूलो क्षेत्रहरूमा बढ्छ। तर कि जायफल छैन प्राप्त गरेको छ र चीनी यो एक धेरै तातो छैन जलवायु उब्जाउ गर्नुपर्छ, राम्रो शैम्पेन begat। इटाली यो prialpiyskie क्षेत्र छ - वेनेटो, Treviso, पिडमन्ट। उत्तरार्द्ध प्रान्त "Moscato" को उत्पादन को लागि सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। पिडमन्ट मा, बारी मा, बाहिर सबैभन्दा-सबै भन्दा जो रक्सी क्षेत्र, खडा छ। र यो Asti को शहर नजिकै स्थित छ। Sommelier सल्लाह: यदि तपाईं निर्माता थाहा छैन, तर लेबल लेखिएको Moscato d'Asti देख, इटालियन शैम्पेन को सही स्वाद चयन गर्न चाहन्छु।
इटालियन चम्केको रक्सी (spumante) यो अपेक्षाकृत सस्तो चिन्ह मा थाह सुरु गर्न। 750 milliliters एक मानक बोतल रूसी पसलहरुमा राखिएको छ सय चालीस चार रुबल। रक्सी एक सय प्रतिशत मस्कट अङ्गुर देखि बनाएको छ। र जामुन पिडमन्ट मा उहाँलाई व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। तर ... यो Langhe क्षेत्रमा Astia बारेमा छैन। धेरै खराब। Santero d'Asti, सुरक्षित प्रमाणपत्र DOCG - उत्पादकको को बाहुला र ट्रम्प कार्ड मा दूर tucked "Santero" मा। तर यो शैम्पेन "Moscato" लायक आठ सय पन्ध्र rubles। यसैले, Langhe देखि रक्सी स्पार्कलिंग को विशेषताहरु के हुन्? हामी एक फिक्का सुनको रंग सुखद बुलबुले पिउन। समीक्षा fruity टिप्पणीहरू संग तीव्र स्वाद र ऋषि सुझावको याद गर्नुहोस्। शैम्पेन मीठो र मखमली को स्वाद। यो chilled मिठाईहरू र फल सिफारिस सेवा गर्छन्। को छ र आधा डिग्री मा पेय को बल बरु यसलाई बढवा छ।
इटालियन रक्सी "Moscato d'Asti" "Canti" उत्कृष्ट गुणस्तर-मूल्य अनुपात रूपमा वर्णन समीक्षा देखि। यसलाई हजार एक सय चालीस rubles को एक मानक बोतल हुनुपर्छ। तर उम्दा भित्र साँच्चै ईश्वरीय पेय पाउनुहुनेछ। लेबल भनेर लागि DOCG गरयो संग सजाया छ मस्कट अङ्गुर हुर्किसकेका र गरे भनेर Asti को रक्सी क्षेत्रमा एक ग्यारेन्टी छ। मात्र नकारात्मक - यो jewel घरमा लामो अवधि लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ। बोतल uncork कारण फेला कुनै थप दुई वर्ष, को लागि छ। यो 8-10 डिग्री गर्न chilled हुनुपर्छ सेवा गर्छन्। यो मीठो शैम्पेन उपयुक्त एक मद्य पेय रूपमा छ। यो पनि हल्का मिठाईहरू (tiramisu, PANNA cotta), वा फल सलाद साथ दिनु गर्न सक्नुहुन्छ। शैम्पेन समीक्षा प्रकाश impeccable स्वाद, जहाँ गुलियो reasonably अम्लता सन्तुलित ध्यान दिनुहोस् मा। रक्सी धनी र तीव्र फल र पुष्प फूलगुच्छा स्पार्कलिंग मा। चिया खूबानी र आरु को आशय संग चमेली र Acacia गुलाब को, यो प्रयोगकर्ता आशय समातिए।
रक्सी "प्लैटिनम गोल्ड Moscato"
चम्केको रक्सी को यो प्रकार Asti क्षेत्रमा कुनै सम्बन्ध छैन केवल छ, तर पनि इटाली सामान्य मा। रक्सी स्पेनको दृढ "गार्सिया Karron" बनाउँछ। तर सबै नै पेय एक सय प्रतिशत मस्कट अङ्गुर देखि गरे, र उल्लेख को त्यसैले योग्य हुनुहुन्छ। यो सेतो अर्द्ध-मीठा चम्केको मदिरा सात डिग्री किल्ला छ। सोही, मस्कट को विशेषता सुविधा यो एक सानो रक्सी दिन्छ भन्ने छ। दाखमद्य सुन्दर फिक्का पराल रंग छ। Perlyazh सानो बुलबुले हुन्छन्।
मीठो शैम्पेन, तर चाखलाग्दा देखि bouquet। यो प्रयोगकर्ता, एक टिप्पणी छोड, कागति को नोट, समातिए उठेर elderberry। हामी उज्यालो र उत्कृष्ट स्वाद मोहक मीठा स्याउ, नाशपाती र रसदार सिट्रस पिउन। Asti एक मूल शैम्पेन छैन रूपमा, "Moscato", यसको मूल्य - प्रति बोतल बस चार rubles। यो पनि एक मद्य पेय लागि आदर्श छ। तर यो पनि मिठाई तालिका लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
इटालियन निर्माता Ceste देश को विभिन्न उत्तरी क्षेत्रका यसको मस्कट चम्केको रक्सी लागि प्रयोग गर्दछ। वेनेटो Treviso वा शैम्पेन प्रकाश माछा व्यञ्जन, समुद्री भोजन र सलाद साथ दिनु गर्न उपयुक्त छ। मस्कट मा देखि धेरै प्राकृतिक चीनी, रक्सी, र मिठाईहरू पेश गर्न सकिन्छ। आफ्नो शक्ति - पाँच डिग्री केही बियर भन्दा कम। तर त्यहाँ "सम्मान" र शैम्पेन निर्माता Moscato d'Asti छ। सबै भन्दा राम्रो क्षेत्रमा सङ्कलन र पेय गुणस्तर DOCG प्रमाणीकरण नियन्त्रण गरिन्छ गर्न बाली। यो पेय बारेमा समीक्षा के? उहाँले एक सुन्दर पराल रंग र sweetish कोमल पूर्ण सन्तुलित प्रकाश अम्लता छ। एक तीव्र, fruity-पुष्प मा रक्सी स्पार्कलिंग को सुगन्ध।
रक्सी "Moscato Spumante Cavatina"
यो चम्केको रक्सी प्रयोगकर्ता उत्कृष्ट गुणवत्ता संग भनिन्छ सस्ता उत्पादन। यसलाई मानक बोतल सबै तीन सय र सत्तरी rubles हुनुपर्छ। तर, एक उत्सव वा विवाह सजाउनु एक धातु लगाम कस्न अन्तर्गत कैदी र compacted swarf पेय योग्य एक प्लग। पुराना शैम्पेन पनि Asti क्षेत्रमा भने संकलन, तर पिडमन्ट को प्रान्त छ। दाखमद्य मध्यम आकार र विशेषता मस्कट स्वाद, जो रसदार पाकेको फल टिप्पणीहरू सुने गर्न सकिन्छ को बुलबुले संग सुनको रंग छ। स्वाद मीठो, सन्तुलित kisletsoy छ। यो पनि फल अमृत को nuances बुझ्न। यो शैम्पेन-सात डिग्री मा किल्ला।
हामी मस्कट अंगूर विविधता मीठो छ भनेर उल्लेख गरिएको र प्राकृतिक चीनी यो पेय पठाउँछ। तर Asti देखि शैम्पेन उत्पादकहरु गर्न सिकेका छन्, र धेरै सुक्खा शैम्पेन "Moscato"। यस पेय को मूल्य आफ्ना भाइहरूलाई semisweet भन्दा उच्च छ। उदाहरणका लागि, "Mondoro ब्रुत" एक हजार पाँच सय rubles प्रति बोतल लायक छ। तर यो भने हुनुपर्छ मानक सात बाह्र डिग्री संग पेय को बल र बढ्ने। जबकि एक आकर्षक फूलगुच्छा र रक्सी को नाजुक स्वाद कायम राखेर। Gourmets पनि "Notte di Tosti Bellichine ब्रुत ग्रैंड Cuvee" प्रयास गर्न सिफारिस गर्नेछ। यो पेय पिडमन्ट सन्तुष्ट गर्नु उत्कृष्ट स्वाद ड्राई आउँछ शैम्पेन फ्रान्सेली प्रकार।
रातो र गुलाबी प्रजातिहरू
हामी जायफल निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं vysheizlzhennogo सबै सेतो अङ्गुर बुझाउँछ। तर यो मामला छैन। ब्रीडर्स ल्याए र रोसाउ र नीरो (कालो), र skantso (रातो) "Moscato"। प्रतिक्रिया सधैं प्रशंसनीय छ स्याम्पेन, एक परिष्कृत पेय, आफ्नो रंग बिना। Gourmets रातो विविधता "Ornella Molon Moscato Spumante" प्रयास गर्न सुझाव दिन्छौं। यो मीठो चम्केको रक्सी मिठाई र विवाह केक लागि उपयुक्त।
मेक्सिकन tequila: के शुद्ध फारम र ककटेल मा एक मिश्रण रूपमा पिउन
Moonshine मा Cranberries: विशेष गरी पकाउने, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु र समीक्षा
को Crimean प्रायद्वीप, वाइन, वाइनरी: सबै भन्दा राम्रो र प्रसिद्ध
विस्तृत निर्देशनहरू: साइडर कसरी बनाउने
वोदका "Beluga" (निर्माता - Mariinsky डिस्टिलरी) विनिर्देशों, समीक्षा
दारिम रक्सी: हामी उहाँलाई थाहा के?
टर्की, Didim: यात्री समीक्षा
विश्व इतिहास: इटाली फासिज्मको
Souffle पनीर - स्वस्थ मिठाई
पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier - को विज्ञापन "सम्राट्लाई" कुकुर नस्ल
Carnauba मोम: गुण र आवेदन
Lecho टापु: व्यञ्जनहरु र सामाग्री
एक व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण के हो?
हाइड: yasuo - वर्णन, सुविधा र समीक्षा। परभक्षी को लिग: मध्य-Leyn yasuo गर्न गाइड
एक तल्ला plinth - कुनै पनि अपार्टमेन्ट लागि अधिकतम समाधान
Blender supovarka: वर्णन, विनिर्देशों, मोडेल र समीक्षा
एक व्यक्ति कसरी खामोशी गर्न?